kuraswa PE kunonaya
PE mvura poncho
inogadziriswa PVC inonaya
PVC mvura poncoh
PE poncho mubhora
Nzira yekutenga raincoat
Maitiro ekutenga raincoat 1. Jira Kune kazhinji mhando ina yezvinhu zvinonaya mvura, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira, izvo zvinogona kutengwa maererano nemamiriro chaiwo. Teerera kuti usiyanise kana jira re raincoat richigadziriswa zvinhu. Izvo zvishandiswazve zvinhu zvine peculiar ...
Nzira yekuchengetedza raincoat
Nzira yekuchengetedza raincoat 1. Tape raincoat Kana raincoat rako iri raincoat rerabha, unofanira kuisa mbatya dzakamboshandiswa munzvimbo inotonhorera uye inofefeterwa nekukurumidza mushure mekushandisa, uye woma iro raincoat. Kana paine tsvina pajazi rako rinonaya, unogona kuisa raincoat rako patafura yakati sandara, uye zvinyoro nyoro ne ...
Chii chaunofanirwa kutarisisa pakutenga majasi evana?
Isu vanhu vakuru tinogara takatakura amburera patinenge tichifamba. Amburera haigone chete mumvuri, asiwo kudzivirira mvura. Zviri nyore kutakura ndechimwe chezvinhu zvakakosha pakufamba kwedu, asi dzimwe nguva hazvisi nyore kuti vana vabate amburera. Izvo zvinodikanwa kuti vana vapfeke raincoat ye childr ...